Ma Jecli! | Martech Zone
Arbacada, Maarso 14, 2012 Arbacada, Maarso 14, 2012 Douglas Karr
Kuwani waxay u badan yihiin ereyadi ugu xumaa ee 4 aad ee aad waligaa ka maqasho wakaalad macmiilkaaga. Waligaa la qabsan maysid inkasta oo ay si cadaalad ah u dhacdo badanaa. Dadku waxay kireystaan ​​naqshadeeyayaasha si ay u sameeyaan wax aan macquul aheynAragti ka soo saaraan madaxooda oo geli sawir, goob, fiidiyoow ama xitaa summad.
Kaaga darane, waa dhif jawaab waa muhiim. Runtii dhib malahan inaad jeceshahay iyo inkale Ilaa iyo inta naqshad aysan dhaawaceynin sumcaddaada oo si xirfadaysan loo qaabeeyey, waxaad u baahan tahay inaad liqdo hankaaga - iyo fikraddaada - oo arag waxa dhacaya. Naqshadayaashu waa koox layaableh… maalin kasta oo wax ka qabta diidmo ka badan celceliska majaajillada taagan. Si ka duwan majaajillada, naqshadeeye waa inuu weydiisto jawaab celin (aka heckling).
Waa kuwan talooyin kaa caawinaya inaad la qabsato u oggolaanshaha naqshadeeyaha naqshadeeyaha:
Qiyaastaadu way awoodaa marna dib loogu abuuraa dunida dhabta ah si sax ah. Weligaa.
Waxaad tahay ma naqshadeeye. Fursaduhu waa, iyagu do ogow waxa fiican.
Naqshadeynta ayaa ah adiga maahan. Naqshadeynta ayaa ah dhagaystayaashaada.
Naqshadeeye weyn ayaa si adag u shaqeyn doona si uu ula kulmo ujeedooyinka naqshadeynta isagoo madadaalinaya codsiyadaada iyo jawaab celinta… ha u qaabeynin codsiyadaada.
Siinta naqshadeeyahaaga xoriyadda in hal-abuur la soo saaro samatabbixin doonaa wax soo saarka ugu fiican.
Diirada saar natiijooyinka nashqadeynta, ma ahan naqshadeynta lafteeda, si loo cabiro guusheeda.
Haddii aad gacan culus ku hayso soo-gelinta nashqadda oo ay shaqeyn weydo, ha eedeyn naqshadeeyaha.
Hadaad tihiin dad ganacsato ah, waxaad inta badan u maleyneysaan inaad sifiican wax u taqaan. Haddii aad guuleysato, mararka qaarkood xitaa way ka sii dhib badan tahay inaad jidka ka baxdo oo aad u oggolaato naqshadeeyahaaga inuu shaqeeyo. Markaan horumarinayno shaxanka iyo bogagga, badiyaa ma jecli waxa la abuuray… laakiin sidoo kale waan hoosaysiiyey markii aan jidka maro halkii aan jidka uga baxayo, nashqadaha ayaa fashilmay.
Naqshadeeyayaasha waaweyni waxay weydiiyaan tan su'aalo ah xitaa waxay ku siin karaan tusaale ahaan, qoraallo iyo soocelinno ku saabsan ra'yi-celintaada. Ma isku dayayo inaan kaala hadlo inaad maal gashato nashqad aad quudhsato; ka dib oo dhan, adiga ayaa iska bixinaya oo waxaad u baahan tahay inaad ku noolaato. Laakiin haddii ay tahay naqshad shaqeyneysa oo aan daruuri ahayn qaabkaaga, qaado fursadda oo arag waxa dhacaya!
Iskudayna inaadan oran, "Ma Jecli!".
Tags: designdesign graphicsawirinfographicsidadesign web
Qoraalka Password Degdegga ah ee WordPress
Waan kugu raaci kari waayey wax badan, Douglas. Macaamiisha badanaa waxay u muuqdaan inay kiraystaan ​​naqshadeeye sidaa darteed macaamilku wuxuu u qaabeyn karaa qayb iyaga u gaar ah, halka xirfadaha naqshadeeyaha lagu tuuro iyadoo laga doorbidayo xirfadahooda farsamada Adobe. Macaamiisha ayaa kufashilmi doona inay fahmaan in naqshadeeye karti u leeyahay uusan garaneynin qalabkooda - waxay kaloo yaqaanaan “naqshadeynta,” taas oo ah qaybta ugu weyn ee xirfaddooda. Intaas waxaa sii dheer, macaamiisha INTEN waxay ilaabaan naqshadeynta loogu talagalay dhagaystayaashooda, maahan iyaga.
Dhinaca foorarka, naqshadeeyayaasha iyo / ama maareeyayaasha mashruucu waxay u baahan yihiin inay hubiyaan inay u qalmaan macaamiishooda oo ay kala tashanayaan sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Macaamiisha marwalba ma yaqaanaan sida loo cadeeyo ujeedooyinkooda, sidaa darteed xiriir xirfadeed oo lala yeesho macaamiisha ayaa ah waajib. Sidoo kale, in badan oo “nashqadeeyayaal ah” ayaa seegay calaamadda, ama ma aha waxa ay yiraahdaan waxay yihiin, mana sameyn karaan naqshad muuqaal weyn oo fulisa ujeeddada macmiil kasta, iyadoon loo eegin sida wanaagsan ee loo muujiyey. Waxaan u maleynayaa in macaamiisha qaarkood ay ka daali karaan tan, sidoo kale.
Ma tihid macaamilkaaga.
Hadaadan ka helin, haddaba waa maxay?
Way adag tahay in la aqbalo-laakiin waa run!
Marti gelinta ugu Fiican
Hagaag, macaamilku had iyo jeer wuxuu aadaa meesha uu taageero ka helo waana hubaa in qof kastaa ogyahay tan. Laakiin mararka qaarkood waan ku raacsanahay macmiilka annaga oo aan helin hal dinaar. Aniga ahaan "Aaminaad" waa erey muhiim ah ganacsiga.
Kuuma sheegi karo inta jeer ee aan arko wax ka dib waxaan weydiistaa wax ka beddelka ama isbeddelkaas ama fekerka ka dambeeya oo keliya si aan u helo jawaab la mid ah "Waxaan horayba isugu dayay taas" "Ma aysan shaqeyn sababtoo ah" mararka qaarkoodna isla markiiba waxaa la siiyaa badbaadiyey tusaale ahaan wixii aan soo sheegay si aan naftayda u arko. Ka dib markii dhowr ka mid ah codsiyadaas la xiriira mashaariic kala duwan waxaan bilaabay inaanan xitaa su'aalo ka weydiin waxyaabaha dambe maxaa yeelay ugu dambeyntii iyagu si fiican ayey u yaqaanaan.
Sidoo kale Id ha ku darin qoolleyda godkaaga naqshadeeyahaaga ama koox hal abuur leh adoo aan siinin xulashooyin kugu filan ama jawaab celin xagga hore ah.